Librem 5 ichataridzika yakanaka neGNOME 3.30 inovimbisa Purism | Linux Vakapindwa muropa
Purism inoenderera mberi ichitaura nezvekuvandudzwa kweinotevera foni pamwe neLinux Librem 5 inoshanda sisitimu iyo ichapinda mumigwagwa munaNdira 2019.
Timu yekusimudzira iri kumashure kweyakavanzika uye yekuchengetedza yakatarisana nhare, Librem 5, haina kumbove nezororo uye iri kushanda kutenderera nguva kuti ibudise foni yeLinux iyo vese vateveri vemahara software yavakarota.
Mune mushumo uchangobva kuitika, Purism yakataura kuti iyo Librem 5 ichataridzika yakanaka kuvonga kune nyowani icon pack yakagadzirwa neayo dhizaini timu chete kune iri kuuya GNOME 3.30 giraidhi nharaunda.
GNOME 3.30 parizvino iri mubeta, asi ichaburitswa zviri pamutemo munaGunyana 5. Kunze kweiyo nyowani icon dhizaini iyo iyo Purism inoshandisa muLibrem 5, GNOME 3.30 ichave nekuvandudza kwakawanda uye nhau.
Mushandisi wekushandisa GNOME-yakavakirwa yeLibrem 5 inoshandisa iyo inotevera chizvarwa Wayland giraidhi server uye haizotsigire X11 kunyorera. Powered by PureOS, Debian yakavakirwa system, iyo Linux Librem 5 foni inozosvika pakutanga iine zvikumbiro zvekutanga zvekufona, kutumira zvinyorwa uye kuongorora internet.
Ipo Purism ichienderera mberi ichishanda pamwe neanogona kugadzira makadhi eLibrem 5, zvizhinji zvezvinhu zvakatotenderanwa kare uye avo vanofanotungamira chishandiso vanogashira kit ine EmCraft's i.MX 8M System-On-Module (SoM), 5.7-inch LCD skrini ine resolution ye 720 × 1440 pixels, pamwe neSIMCom 7100A kana SIMCom 7100E modem yezvikwata muUnited States kana kuEurope.
Pamusoro pezvo, iyo Librem 5 kadhi rekuvandudza ichave ne Redpine RS9116 M.2 Wi-Fi uye module yeBluetooth iyo inotsigira 2.4 GHz uye 5 GHz mabhendi eWi-Fi, asi kwete 802.11ac uye a Kubwinya OV5640 CMOS chip iyo inoshanda seye sensor yemufananidzo yeiyo kamera. Iwo makiti, ayo anozotumira munguva pfupi, anoitirwa kune vanogadzira vanoda kutanga kugadzira kunyorera kweLibrem 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Iyo Librem 5 ichataridzika yakanaka neGNOME 3.30 inovimbisa Purism
Ini ndinoda imwe, chimwe chinhu chinonditendera kuti ndifambe ndisina yangu nhare kuve dhata faira kumakambani akazvimirira, ini ndoda 1 asi izvozvi!
Pindura kune QuantumBit
Gnome inozopedzisira yashandira icho chaakagadzirirwa, che touch touch.
kwatove neiyo Genesis PDA kubva kupuraneti makomputa pasina munhu anokurumidza https://www.planetcom.co.uk/?page_id=8
Juan Luis akadaro
Nhare ISINA kamera, isina GPS, ine michina yekukiya maikorofoni, ine michina yekukiya yeiyo antenna.
Pindura Juan LUiz
Puigdemont 64bit akadaro
Ndeipi mania iwe yaunayo yekuisa iro zita rakanaka kune zvese zvine chekuita neLinux.
Pindura Puigdemont 64bits